SAM ကို-ဗြိတိန် - ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး Install လုပ်နည်း
ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး ရေကန်၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးသင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံပါလိမ့်မယ်။ သင်က install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။
ဤရွေ့ကားညွှန်ကြားချက်သာမန် installation ကိုအခြေအနေများအောက်တွင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ပြည်တွင်းအခြေအနေများအထူးအခွအေနရှိစေခြင်းငှါနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်ရာသီဥတုနှင့်ဆင်းရဲသောသောမြေဆီလွှာအခြေအနေများအဖြစ်ကဤညွှန်ကြားချက်များတွင်ဖော်ပြထားသောအကြံပြုတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများမှစသောအပြောင်းအလဲလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်လိုအပ်သော Tools များ
ကွန်ကရစ့် String POS-ရောထွေး
POS-ပေါက် digger / လွန်
ရထားလမ်းကြီးစွန်းတံဆိပ်ခတ်ထားမှ duct တိပ်
လိမ်ဖဲ့ခြင်း (တံခါးဝ adjust)
အများစုမှာဒေသများသင်ကြိုတင်တူးဖို့တည်ရှိသော utilities ရှိသည်ဖို့မခေါ်နိုင်မခေါ်ဆိုမှုစင်တာရှိသည်။ သင့်ဒေသခံ utility ကိုကုမ္ပဏီ Calling ဖုန်းခေါ်သူကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအများဆုံး utility ကိုကုမ္ပဏီများကအိမ်ပိုင်ရှင်သို့မဟုတ်ကန်ထရိုက်တာများက install လုပ်ထားခဲ့ပုဂ္ဂလိက utility ကိုလိုင်းများနေရာချထားခြင်းနှင့်အထိမ်းအမှတ်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ တွင်းတူးမတိုင်မီက, သင်က utility ကိုလိုင်းပျက်စီးသောဖြစ်ရပ်အတွက်ဖုန်းခေါ်အရေးပေါ်နံပါတ်များနှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ရပါမည်။
သင်ခြံစည်းရိုးဝယ်ယူသည့်အခါသငျသညျဖွယ်ရှိတဲ့ layout ကိုဆွဲငင်နှင့်သင်လိုအပ် fencing ပမာဏကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီ။ ဒါဟာကြိုတင်သင့်ရဲ့ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး purchasing လုပ်ပြီး install ဖို့ခြံစည်းရိုး၏ layout ကိုဆွဲရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
စတင်ရန်, သင့်ခြံစည်းရိုး၏အသီးအသီးထောင့်နှင့်အဆုံးတည်နေရာမှာရှယ်ယာရိုက်။ အဆုံးနဲ့ထောင့်ရေးသားချက်များအကြားတစ်ဦး string ကိုလိုင်း Pull ။ သင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုး၏ဗဟိုဖြစ်လိမ့်မည်ရှိရာဤသည် string ကိုလိုင်းကိုယ်စားပြုတယ်။ ကခြံစည်းရိုးလိုင်း၏အစွန်းကိုကိုယ်စားပြုနိုင်အောင်လူအတော်များများဤအချိန်မှာ string ကိုလိုင်းထေ; ဤသူသည်သင်တို့တိုင် setting ကိုစတင်တဲ့အခါမှာတစ်ဦးအပိုဆောင်းခြေလှမ်းကယ်တင်မည်။
မာကုခြံစည်းရိုးထဲကတစ်ခုအဆုံးမှာအစနဲ့ပို့စ်တစ်ခုခြင်းစီ၏တိုင်းတာခြင်းဗဟိုမှဗဟို marking အားဖြင့် post ကိုပေါက်တည်နေရာ။ သငျသညျစင်တာအပိုင်းတခုတခုအပေါ်မှာရှစ်ခြေလျင်ရှိပါကဥပမာ, သင်သည်သင်၏ပထမဆုံး post ကို 96 ၏ဗဟိုကနေတိုင်းတာလိမ့်မယ် "နှင့်ဆေးသုတ် marking ဇောက်ထိုးနှင့်မြေကို mark ။ သငျသညျအဆုံး post ကိုရသည်အထိ string ကိုလိုင်းချတိုင်း 72 "သို့မဟုတ် 96" marking Continue ။
အများစုမှာစီမံကိန်းများကိုအတိအကျ6'သို့မဟုတ် 8' 'နှစ်တိုးဖြစ်ကြောင်းခြံစည်းရိုးလိုင်းများရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနှင့်တိုင်းတာသည့်အခါဿုံထွက်မလာပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအနညျးငယျရှေးခယျြမှု၏တဦးတည်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ Option ကို 1 လိုင်းရဲ့အဆုံးမှာတိုတောင်းတဲ့အပိုင်းရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Option ကို2သငျအတော်ကြာရှည်လျားကဏ္ဍများရှိသည်နှင့်တဦးတည်းအတိုချုပ်အပိုင်းပါဘူးဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးပေါ်အပိုင်းတော်တော်များများကိုအတိုကောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
တွင်း & amp တူးဖော်ခြင်း; The post Installing:
တစ်ဦး posthole digger သို့မဟုတ်တစ်ခုလွန် အသုံးပြု. တူးတွင်း။ ပုံ 6.4 တွင်ကြည့်ပါ။ သင်တို့ကိုခေါ်တော်နှင့်တည်ရှိအားလုံး utility ကိုလိုင်းများနှင့်သင်သည်မည်သည့်ပဋိပက္ခများမှအညီသင့်ရဲ့ခြံစည်းရိုးကိုထိန်းညှိကြောင်းပါပြီသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏စီမံကိန်းအနည်းငယ်တွင်းထက်ပိုလျှင်သင်တစ်ဦးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလူသလွန်ငှားဖို့သင့်ဒေသခံသေးငယ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ tool ကိုငှားရမ်းစင်တာသို့ဆက်သွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလူသလွန်ကို အသုံးပြု. လြှငျ, သေချာသင်သည်သင်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအာမခံထားဖို့စစ်ဆင်ရေးကို manual နှင့်အတူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေ။
ဂိတ်ပို့စ်များကိုအခြားခြံစည်းရိုးပို့စ်များကို installed လျက်ရှိသည်တစ်ချိန်တည်းမှာသတ်မှတ်ထားရပါမည်
နှင့်အတူတူပင်နည်းလမ်းများ အသုံးပြု. ။
အဆိုပါရထားလမ်းနှစ်ဖက်စလုံးတခုတခုအပေါ်မှာတန်းတူအကွာအဝေးထိန်းသိမ်းသည် post ကိုစအောက်ခြေရထားလမ်းထည့်ပါ။
အောက်ခြေရထားလမ်း IN PICKETS INSERT:
အောက်ခြေရထားလမ်းသို့ pickets ထည့်ပါ။ အားလုံးရေကန်များဝင်ရောက်များအတွက်လိုအပ်သောခြံစည်းရိုးအပိုဆောင်းအစွမ်းသတ္တိကိုပေးစေခြင်းငှါသည်အခြား picket သို့ v ပုံမာကြောထည့်သွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
THE TOP ရထားလမ်း Installing:
ပို့စ်အတွက်လမ်းကြောင်းတွင်းထဲသို့နှင့်ထိပ်ရထားလမ်းဟာ pickets သည်အထိအချိန်မှာရထားလမ်းတဦးတည်းအတွက်ဖြည့်စွက်ဖို့လိုဆနျ့ကငျြပို့စ်တွင်လမ်းကြောင်းတွင်းထဲသို့လျှောဖို့အနေအထားသို့ဆင်းဆွဲထုတ်နေသည်အဖြစ်ရထားလမ်းအစာကျွေးခြင်းဖြင့်ထိပ်ရထားလမ်း Install အဆိုပါ pickets အပေါငျးတို့သထိပ်တန်းရထားလမ်း၏အောက်ခြေဘက်အတွက်ဖြည့်စွက်ထားပါသည်။
အဆိုပါရထားလမ်းနှင့်ဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းမြို့ရိုးကိုနောက်သို့အစုတခုဝက်အူအားမရသဖြင့်ထိပ်ရထားလမ်း Secure ။ ထစ်သို့မဟုတ်ရထားလမ်းကလစ်များမှာလည်းထိပ်တန်းရထားလမ်း secure ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
တံခါးဝရေးသားချက်များများအတွက်ကွန်ကရစ်ဖော်စပ်တဲ့အခါမှာကအကောင်းတစ်ဦးကိုက်ညီမှုရဖို့အရမ်းထူအရေးကြီးပါတယ်နှင့်ကွန်ကရစ်ကကျောက်ဖြစ်သကဲ့သို့စနစ်တကျဖွဲ့စည်းမည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျတိုင်သို့ဖြည့်မထားဘူး, လွန်း soupy နှင့်ကွန်ကရစ်အဆိုပါသံလမ်းကိုဆင်းပြေးမည်မဟုတ် ကွန်ကရစ်ရေနှင့်ရောလျက်ရှိ၏အဖြစ်လုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်။
အခြားရွေးချယ်စရာကွန်ကရစ်ထုတ်ကုန်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောအမြန်တင်နိုင်ကွန်ကရစ်အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့လိုပေမည်။ နောက်ထပ် option ကိုကွန်ကရစ်အစားတံခါးဝတိုင်၏အတွင်းပိုင်းသတ္တုမာကြောသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဤရရှိနိုင်ရှိသည်နှင့်မေတ္တာရပ်ခံအဖြစ်သူတို့ကိုမရောင်းနိုင်။ ကွန်ကရစ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသထားပြီးပြီးတာနဲ့တံခါးဝအလိုရှိသောတံခါးဝ width နဲ့ကျင်းပနိုင်ရန်ဖို့ပတ္ညှိဒါမှမဟုတ်တပ်မက်လိုချင်သောအမြင့်မှာတံခါးဝအထိပိတ်ဆို့ခြင်းများနှင့်တံခါးဝဖို့ပတ္ screwing အားဖြင့်ဟာ့ဒ်ဝဲမှပူးတွဲပါနိုင်ပါတယ်။ အများစုမှာရေကူးကန် codes တွေကိုကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိတ်ပွဲပတ္တာကိုသုံးပါနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းမှာ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ပိတ်ဖို့ရန်မြို့တံခါးဝလိုအပ်မှရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးလိုအပ်သည်။
သငျသညျအကောင်းတစ်ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးများမျှော်လင့်ပါတယ်! သင်မကြာခဏကြှနျုပျတို့၏ website သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကျနော်တို့မကြာခဏအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကို update ပါလိမ့်မယ်။
Installing ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုးတပ်ဆင်ခြင်း ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး၏ installation ကို ရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး၏ installation ကို ဗီနိုင်းရေကူးကန်ခြံစည်းရိုး